မော်ဒယ်မြင့်၊ဈေးသင့်ကားသစ်တွေရောက်လာတော့မယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မော်ဒယ်မြင့်၊ဈေးသင့်ကားသစ်တွေရောက်လာတော့မယ်
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on May 18, 2012 in Business & Economics, Complaint / Claim | 20 comments
2007 /02 Toyota Camry , U$ 8500+ 1500(shipment)=10000 u$,မြန်မာငွေ ၈၅ သိန်းကျပ်။ ငွေလွှဲ နင့် ကားလေလံ ၀န်ဆောင်မူ့ ၁၀ သိန်းပတ်လည်။
အခွန် + ကညန = သိန် ၄၀ ကျပ်။ အားလုံး ပေါင်းရင် ၁၃၅ သိန်းဖြင့် ၂၀၀၇ မော်ဒယ် toyota ကားများ ၈ လပိုင်း ၂၀၁၂ မှစတင်ကာ လက်ဝယ် ရောက်ရှိ ကြတော့မည်။ Jun လဆန်းတွင် မှာယူထာသော ကားများဟာ August လတွင် လက်ဝယ် ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ကားဝယ်မည့်သူများ ၈ လပိုင် ၂၀၁၂ နေ့ မှ ၀ယ်ယူကြပါ ရန် သတိပေးအပ်ပါသည်။
ယခုလို ကားပါမစ် မပါဘဲ ကားသွင်ခွင့်ပြုလိုက်သဖြင့် ကားဈေးနှန်းများ ကြဆင်း သွားခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ပေါက်ဈေး ၂၀၀၂ မော်ဒယ် Toyota Camry ကားကို သိန်း ၂၃၀ လို့ပြောပါတယ်။
၈/၂၀၁၂ မှ ၀ယ်ရင် မော်ဒယ်က ၂၀၀၇ ကားဈေးက အလွန်ဆုံး သိန်း ၁၅၀ ပတ်လည်နင့် ရရှိနိင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ဦးမျိုးရေ ကျနော့်သတင်းမှန်၊မမှန် အတည်ပြုပေးစေလိုပါတယ်။ရွာသူားများဆီက ထင်မြင်ချက်လဲ ကြားချင်ပါတယ်။
ကိုကိုဇာရေ ၊ ၁၃၅သိန်းလောက်နဲ့ အသစ်ရနိုင်ပြီဆိုတာ သိရလို့ တစ်ဝက်ဘဲဝမ်းသာနိုင်သေးတယ်ဗျာ ။ ဒီထက် ထပ်လျော့နိုင်သေးလား လို့ မှန်းကြပါဦး ။
ဟိုက်. တိုတိုဇာဆိုပါလား. ကွယ်ရို့ ။ဘာလို့ လဲ ကိုပေရေ။ကိုပေ့ ဒိုနဲ့ ကလစ်နဲ့ (၂)စီးပေါင်းက
ကျနော် ကားခမ်မနီထောင်ရင် အာကို့ ကို
အာကို အာကေရှိသလောက် တန်ရာတန်ကျေး တစ်စချင်းစီ ဖြုတ်ရောင်းပေးပါ့မယ် အာကို
@အူးဗိုက်—— ဇကားမပီတော့ပါလား ။ဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။စိတ်ချနေပါ. ရောင်းပေးပေါ့မယ်။
@ကိုဟိန်းဝင်းရေ—–အမ ခင်ခ ပြောတဲ့လိပ်စာလေးအတိုင်း စုံစမ်းကြည့်ရအောင်။
နေရာက- အမှတ် ၇-၈-၉ ၊အဆောက်အဦး A B C,ရွှေမြရာအိမ်ယာ၊မြရာကုန်းလမ်း၊မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်၊
ရန်ကုန်။ဖုန်းနံပါတ်က-01 8619022 ၊ 01 8619033 ၊ 09 73184111 တဲ့။
မန္တလေးမှာတော့ နန်းတော်ဆေးရုံနားမှာလို့သိရတယ်။ဖုန်းက-02 60480 ၊ 09 73146734။
@Unclelay ခင်များ. —ကျနော့်သူငယ်ချင်းနယ်စပ်ကနေကားသွင်းနေသူတစ်ယောက်က ပေးတဲ့သတင်းမို့ 
ပြန်ဝေမျှလိုက်တာမို့သေချာ မစိစစ်မိပါဘူး။ကိုယ်တိုင်ကလဲ ကားလောကသားမဟုတ်
လေတော့ ဝမ်းသာအားရနဲ့ သိစေချင်လို့ ပါ။
@ကိုလင်းဝေ နဲ့ ကိုzaw min ခင်များ ခုလိုလင့်ခ်လေးနဲ့ တွဲ ယှဉ်ပြောပြပေးလို့ ကျေးဇူး အထူးပါနော့်။
@မေဖလားဝါးရေ. သိပ်အကြာကြီးတော့ မစုရလောက်ပါဘူးကွယ်။နီးစပ်လာပီပေါ့။
ကိုnature က လိပ်စာ သိချင်တယ်ပေါ့။အားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါဗျ။ကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲပို့ စ်တင်ပေး
နေတဲ့ ဦးမျိုးဆီက လဲကြားချင်ပါသေးတယ်။ဒါပေမယ့် သူပျောက်နေပါလား။
phoe phoe gyi says:
Toyota Camry isahot demand series of Toyota group in Asia and Oceania Region. 2006 model is above 12000US$ in FOB.2007 model is around 14000US$ according to goonetcar.com and tradecar.com and japautoauction.com. And then Myanmar Trade Ministry’s price for 2007 is 22000 US$ , 2008 is 23000 US$. These cars are 2.2 or 2.5 liter cars. So Custom Duty and Trade Tax is65% of car value.Road Transportation and Management Authority ( Ka Nya NA) Tax is 100% of car value .Bank LC and miscellaneous causes are around 100000ks, Agent commission is5to 10 % of car value. how to become 150,lacks of Myanmar kyats.Please don’t give sweet dream to those don’t know about car importing.
ဖိုးဖိုးကြီးရေ. ကျေးဇူးပါဗျ။ဖွားဖွားကြီ့း အတွက် ဘာကားများဝယ်ပေးမယ် စိတ်ကူး
စိတ်ဝင်စားတယ် … ကားအကြောင်းတော့သိဘူး …. ဆက်တင်ပေးပါဗျို့ …. အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ … ဘယ်အချိန်ဝယ်သင့်တယ် … ဘယ်အချိန်မ၀ယ်သင့်ဘူးပေါ့ …. လောလောဆယ်တော့ ၀ယ်နိုင်သေးဘူး …. သူများကို တော်ကီ ပြန်ပစ်မလို့ . … ဟီး
မနေ့က မန္တလေးသတင်းစာမှာ ကားအေးဂျင့်တစ်ခုက ကြေငြာတာဖတ်လိုင်ရတယ်၊
သိန်း ၁၁၀ ကျော်နဲ့ ကားသစ်စီးနိုင်တော့မယ်တဲ့။
ငွေလွဲနဲ့ ကားလေလံခတော့ပါ မပါ မသိဘူး၊
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၁၃၀-၁၃၅ လောက်နဲ့ကားသစ်စီရမှာပေါ့။
ကားဟောင်းပါမစ်လက်ဝယ်ကိုင်ထားသူတွေတော့ ငိုနေလေရဲ့ ပါမစ်ဈေး ၁၄၀ လောက်ကနေ
အခု ၆၀-၇၀ လောက်ဘဲရှိတော့လို့တဲ့။
Facebook Comment မှ…….TOYOTA CAMRY 2007 ရဲ့ CIF တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၂သောင်း၂ထောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ပါဝါက 2.4 CC ဖြစ်တဲ့အတွက် အခွန်+ကညန= 22000*165%=36300US$ ကျပါတယ်။ အခွန်ချည်းသက်သက် မြန်မာငွေတန်ဖိုး သိန်း၃၀၀ ကျပ်ကျော်ကျသင့်ပါတယ် အပေါ်ကတွက်ပြထားတဲ့ အခွန်+ကညန=သိန်း၄၀ ကျပ်ဆိုတာမှားနေပါတယ် Toyota Camry သည် 1300CC ကားမဟုတ်ပါ။
ကားကိုအရစ်ကျနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်တဲ့၊လက်ငင်း ကားတန်ဖိုးရဲ့ ၃၀% ပေးပြီး၊
ကျန် ၇၀%ကို ၂၄လ အရစ်ကျစပ်ပေးစနစ်တဲ့။ဒါဆိုဝယ်နိုင်ဖို့နီးပြီလား၊အမြန်ဝယ်နိုင်ပါစေဗျာ။
နေရာက- အမှတ် ၇-၈-၉ ၊အဆောက်အဦး A B C,ရွှေမြရာအိမ်ယာ၊မြရာကုန်းလမ်း၊မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်၊
နေရာပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ ….
အင်း…ခုကစပြီးငွေစုတော့မယ်။ နောင် ၁၀ နှစ်လောက်ကြာရင်တော့ ကားစီးနိုင်ကောင်းပါရဲ့။
အပေါ်မှာ တစ်ယောက်တွက်ပြထားသလို ၂၀၀၇ အထက် အင်ဂျင်ပါဝါ ၁.၃ အထက်ကားတွေဆိုရင် အခွန်ချည်းပဲ သိန်း ၂၅၀ကျော်ကျပါမယ်။ ၂၀၀၇ Camary ကို ကားအလုံးချည်းပဲ ဒေါ်လာ ၁၀,၀၀၀ လောက်နဲ့ရဖို့ကလည်း မလွယ်ပါဘူး။
http://exchange.goo-net.com/ မှာ တက်ကြည့်ပါကွယ်။
အဓိက ကတော့ အစိုးရ အခွန်တွေ လျှော့ပေးသင့်ပါတယ်။
လမ်းကို ထိမ်းသိမ်းကွပ်ကဲနိုင်မှုအရည်အချင်းလည်း ဒီထက်မြင့်ဖို့လိုပါတယ်။
ကိုနာဂရေ…အပေါ်က ကိုလင်းဝေနဲ့အန်ကယ်လေးတို့ပြောတာမှန်ပါတယ်ကွယ်…Toyota Camary 2000 model တောင် အင်ဂျင်ပါဝါ ၂၂၀၀စီစီရှိပါတယ်…။ဈေးနှုံးနဲ့ပုံကို ဟောဒီလင့်မှာသွားကြည့်လိုက်ပါ။
သေချာတာကတော့ ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် ကားဈေးတွေကတော့ ဆက်လက်ကျဆင်းနေအုံးမှာပါပဲ…
လူကြားကောင်းတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ တစ်ရစ်ချင်း ၊ တစ်ရစ်ချင်း ။ ပြည်သူတွေ ကောင်းဖို့၊ အားလုံးကောင်းဖို့ ၊ ကျနော်တို့ ကောင်းဖို့ ၊ သူတို့ ကောင်းဖို့ ဘက်စုံကောင်းဖို့ အခွန်တွေ ထပ်လျှော့ပေးလိမ်မယ် ဥပဒေ ၊ စည်းမျဉ်းတွေ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောင်းပေးလိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ။်
ဟုတ် ဟုတ် ရွှေမင်းသားရေ—–သေချာတာကတော့ သူများနိုင်ငံတွေက စွန့် ပစ်ကားတွေ၊မိုင်နှုန်းပြည့်လို့ မောင်းခွင့်မရတော့
တဲ့ကားတွေ၊အရည်အချင်းမပြည့်မှီတဲ့ ကားတွေဝယ်စီးနေရတဲ့ ခေတ်တော့ ကုန်ပီပြောရမယ်
တော်တော် နောက်တဲ့ ကို နာဂရ …. ဒီတခါတော့ နီးစပ်ပြီဟဲ့ ထင်ပြီး ဖတ်မိတာ…
သွား .. လူဆိုး.. ဒီက အကောင်းမှတ်လို့ . ဟွန့်…..။.
အခွန်တွေ ဒီထက်ကျလာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်….